Madaxweynaha oo soo dhoweeyay dhismaha baarlamanka cusub ee maamulka Galmudug | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Wararka » Madaxweynaha oo soo dhoweeyay dhismaha baarlamanka cusub ee maamulka Galmudug
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyay dhismaha baarlamanka maamulka cusub ee loo sameynayo gobollada dhexe, kaasoo lagu dhaariyey magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in dhismaha baarlamankan cusub ay ka tarjumeyso horumarka laga sameynayo dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatey.
“Shacabka gobollada dhexe waa cusub ayaa u baryey, shaqo badan ayaana sugeysa. Dhismaha baarlamanka waa bilowga dhismaha maamul buuxa oo degaanadaasi ay yeeshaan mustaqbalka. Waxaan shacabka gobolladaasi u sheegayaa inay ka faa’ideystaan fursadda ay heystaan oo ah inay rabitaankooda ku soo doortaan cidda ay doonayaan inay hoggaamiso, iyadoo Dowladda Federaalkana ay diyaar u tahay in cid kasta oo la soo doortaa ay la shaqeyso” ayuu yiri Madaxweynaha.
Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa lagu wadaa in dhowaan ka dhacdo magaalada Cadaado, iyadoo Wasaaradd Arrimaha Gudaha ay sheegtay in howlaha Maamul dhisida ay ku soo gaba gabaneyso muddo labo todobad gudahood
« Wasiir Diini “Weerarada Argagixisada kama weecinayaan Soomaaliya iyo saaxibadeeda horumarka iyo dib u dhiska
Dowladda oo 25 sano kadib la soo noqonaysa hogaaminta mashaariicdii Midowga Yurub ku taageeri jirtay Soomaaliya+SAWIRO »